मुख्य समाचार – Page2– दाङ खबर
फुस्किएन कांग्रेसभित्रकाे विवादकाे गाँठाे
काठमाडौं भदौ ४ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको असार २२ गतेको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १४ बुँदे एजेन्डा पेस गरेका थिए । बैठकमा संघीयताअनुसार पार्टीको अन्तरिम संरचना गठनदेखि भ्रातृसंस्था विधान संशोधन र विधानअनुसार अवधि समाप्त भएका भ्रातृसंस्थाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । काँग्रेस बैठक एक महिनाका बीचमा एक दर्जनपटक बस्यो । बैठकमा १४ एजेन्डामध्ये आधा पनि छलफल हुन सकेको छैन । ती मध्ये तीन एजेन्डा बैठकले पारित गरेको छ भने कतिपय एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत भए छलफल बिनै पारित भएका छन् । असार २९ गतेको बैठकले पार्टीको संशोधित नियमावलीको मस्यौदाउपर आवश्यक सल्लाह गरी प्राप्त सुझावलाई मस्यौदा समितिले सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी पारित गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
सर्वदलिय बैठकपछि नेताहरुकाे प्रतिक्रिया
काठमाडौं भदाै ४ । के संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध नेपथ्यमा ‘षड्यन्त्र’ सुरु भएकै हो त ? प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा मंगलबार अचानक बोलाइएको सर्वदलीय बैठकको मूल एजेन्डै त्यही रह्यो । र, संविधान बनाउने शक्तिहरू एकगठ भएर ऐक्यबद्धता जनाए, ‘संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा हामी सधैं, सबै, सँगै छौं। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ विषय उठान गरेका थिए– १. प्रणालीकै विरुद्ध आवाज उठ्न थालेका छन्, यो दुस्साहस कहाँबाट कसरी आयो ? २. बढ्दो हिंसाविरुद्ध शान्तिका पक्षमा सरकार एक्लै लड्ने कि विपक्षीले पनि साथ दिनुपर्ने हो ? ३. लोकतन्त्रका आधारभूत सबाल र संविधानलाई बलियो बनाउने विषयमा हामी सबै एक ठाउँ किन नहुने ? संसद्मा सम्बोधनका क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्रीले ‘चिहानमा गई हड्डी फुकेर अब पुरानो व्यवस्था फर्काउँछु नभने हुन्छ’ भन्ने कडा चेतावनी दिएका थिए । त्यसले पुरानो दरबार
रवि लामिछाने प्रकरण राेचक बन्दै
काठमाडौँ, भदौ ३ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा चितवनमा जारी प्रदर्शनमा विभिन्न तत्वको घुसपैठ रहेको तथ्य फेला परेको छ । पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनको समर्थनका नाममा भइरहेको प्रदर्शनमा घुसपैठ रहेको प्रहरी दाबी छ । प्रहरीले आज मात्र घुसपैठमा स‌ंलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । चितवन प्रहरी स्रोतका अनुसार सुरज श्रेष्ठ र मोहन खतिवडालाई आज दिउँसो पक्राउ गरि कानुनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । यसअघि राजावादी, राप्रपा र काँग्रेसनिक केही व्यक्तिहरु घुसपैठ भएको भिडियोहरु सार्वजनिक भएपनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लोपटक घुसपैठमा संलग्न दुई जना पक्राउ परेसँगै विभिन्न तत्वको घुसपैठ पुष्टि भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु कुन समूहसँग संलग्न छन् र कोबाट परिचालित छन् भनेर प्रहरीले
रवि लामिछानेमाथिकाे अनुसन्धान जारी
काठमाडाैँ भदाै ३ । टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने थप ५ दिन हिरासतमा रहने भएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनले मंगलबार उनीसहित ३ जनालाई फेरि ५ दिन म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको हो । यसअघि साउन ३१ गते पनि उनीहरुलाई ५ दिन म्याद दिएर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । अदालतले लामिछानेसहित पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीसँग सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिन बयान लिएसँगै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै म्याद थप गरेको हो । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा मुछिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई गत बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
जनकपुरधाम भदौ ३। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधले उत्पन्न हुँदै आएको समस्या समाधानका लागि भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा उहाँले बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देश मिलेर जनताको हितमा कार्य गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो । बाँध निर्माणले बर्सेनी उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देशले सहकार्य र समझदारी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र तत्कालीन व्यवस्थाको चक्रव्यूहबाट पार पाउन विपद्को चुरो पहिल्याई दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो । प्रदेश नं २ मा चुरे संरक्षण, बलियो बाँध निर्माण र नदीन